Itekhnoloji emva kweekhasino ezikwi-Intanethi > UVielhuber uDavid
Itekhnoloji emva kweekhasino ezikwi-Intanethi03
Kwiminyaka embalwa ngoku sele behluma baphuma emhlabeni: iikhasino ezikwi-Intanethi. Baninzi ababoneleli abenza ukugembula kubalandeli ukuba bazonwabise ngokuzonwabisa kwi-Intanethi ubusuku nemini. Nabani na owayethanda ukuya ekhasino ngoku angazigcinela uhambo kwaye atshintshe ikhompyuter. Kodwa usebenza njani lo mgaqo?
Kuba apho kukho umthengisi kwikhasino yokwenene osasaza amakhadi kunye neetshiphusi, ugcina iso kuyo yonke into kwaye unoxanduva lokuqinisekisa ukuba umdlalo uqhuba kakuhle, ikhasino ekwi-Intanethi ifuna ukubuyiselwa okwaneleyo. Ungaqinisekisa njani ukuba imidlalo isebenza ngendlela oqhele ngayo kubomi bokwenyani?
Ukulungiselela le njongo, kusetyenziswa iintlobo ezikhethekileyo zesoftware, eziye zafumana uhanahko lwazo ukusukela oko kwafika ii-Casinos ezikwi-Intanethi kwaye zenze umzi mveliso omtsha. Ngoku kukho phantse uninzi lwabenzi besoftware abaziwayo beekhasino ezikwi-Intanethi njengoko kukho ababoneleli abakwi-Intanethi, nangona ezimbalwa kubo zimile ngokucacileyo. Umzekelo, kukho iMicrosoftGaming, ethathelwa ingqalelo njengovulindlela kuphuhliso lwesoftware. Inkampani yaqala ukungcakaza kwi-Intanethi embindini we-1990s kwaye yayiyeyokuqala yokuvula indlela kwintengiso. Ababoneleli abafana ne-32Red okanye i-All Slots Casino baphakathi kwabathengi abaphambili beMicrosoftGaming nabaziwayo. Apha inkampani inoxanduva lokuqinisekisa ukuba uzama ithamsanqa lakho kumaphepha afanelekileyo koomatshini bokudlala kwidijithali okanye kwiitafile zeroulette kwaye mhlawumbi uzuze imali enkulu kwi- 32Red nakwi-Co.
Kodwa iMicrogaming ayisiyiyo kuphela ingxilimbela ephaya. Kungekudala emva kokuba inkampani iqale ukuphumelela, ezinye iinkampani zeza nombono wokujongana nesi sihloko kwaye ke iiCasino zeNet Entertainment, iPlaytech kunye nezinye ezininzi zalandelwa kungekudala. Nokuba ungadlala phi kwi-intanethi, mhlawumbi lelinye lamagama amakhulu emva kwayo. Uninzi lweenkampani zazisekwe kwiminyaka ye-90s, zafumana i-boom ejikeleze i-Intanethi kunye nayo yonke into enxulumene nayo, ke ngomzimba wazo kwaye zilungelelaniswe ngokugqibeleleyo noko abathengi kunye nabasebenzisi bafuna ukukunikwa xa Bhalisa kwikhasino ekwi-Intanethi ukuzama ithamsanqa lakho apho.
Kodwa isebenza njani kanye nale software yekhasino? Emva kwayo yonke loo nto, into oyibonayo kumatshini wokufaka kuthungelwano, umzekelo, kufuneka uvele kwenye indawo, okt kufuneka ukuba yenziwe. Kukho iijenreyitha ezithile zoku. Babizwa ngokuba ngabavelisi beenombolo ezingahleliwe , okanye i-RNG ngamafutshane, kwaye njengenguqulelo erhabaxa abayimeli enye into ngaphandle kwegama elivelisayo lenombolo. Umsebenzi wabo kukuqinisekisa ukuba amanani abonakala kumatshini wedijithali ngokwenene avela apho ngokungacwangciswanga. Ngethamsanqa, imeko yangoku yobugcisa sele iyenzile le nto, kodwa ukusebenza kwee-RNGs ngokubanzi kusathathelwa ingqalelo njengezintsonkothileyo, ukuze ube nokufumana imathematika eninzi ukuze ukwazi ukulandela le nkqubo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kule ndawo kukudlala ngokufanelekileyo. Abasebenzisi ngekhe basabele ngenzondelelo ukuba kuye kwavela ukuba iikhasino ezikwi-Intanethi zisebenzisa isoftware eqinisekisa ngenjongo yokuba zimbalwa iinzuzo ezenziweyo. Kule meko, kuya kufuneka unamathele kubanikezeli abaziwayo, kuba ufumana isiqinisekiso sokuba yonke into iza kuhamba kakuhle. Ngaphandle kwalonto, ababoneleli abadingi ukukopela abathengi babo, kuba ukubetha i-jackpot kumatshini we-slots kuphantsi kakhulu kangangokuba i-casino ekwi-intanethi uqobo lwayo ihlala iphuma kunye nokudibanisa. Iinzuzo ezincinci zihlala zinokwenzeka, kodwa ukuba umntu uneentlanzi ezinkulu ngokwenene emgceni kunqabile ukuba zenzeke. Ukuba isoftware esemva koomatshini bokudlala kwi-Intanethi isebenza ngokufanelekileyo kwaye ayithandi okanye iphazamise nabani na, ke awunakukhathazeka malunga nento enjalo njengomdlali.
Ngenxa yokuba oomatshini abaninzi be-slot beqhutywa ngumvelisi ongacwangciswanga, umdlali kufuneka athi ndlelantle kwimbono yokuba nakho ukusebenzisa iqhinga ngandlela thile. Ukuba yonke into izakulunga, kuya kufuneka uphile nenyani yokuba ixhomekeke ngokupheleleyo kwithamsanqa okanye ithamsanqa elibi lomntu nokuba uyagoduka unenzuzo okanye ilahleko. Ulwabiwo lwenzuzo luxhomekeke kubalo, hayi kumzuzu ucofa iqhosha lokumisa okanye ukujikeleza kwakungaphambili. Le meko iyafana nesoftware, emisela ukuba leliphi na ikhadi elinikezelweyo, umzekelo, xa udlala i-blackjack okanye i-poker ekwi-intanethi. Nangona kunjalo, ungasebenzisa ngakumbi amaqhinga kumdlalo olandelayo kunakwimidlalo ye-slots. Kuhlala kunomdla ukubona ukuba isoftware iza kuphuhla njani kule minyaka izayo. Ngubani owaziyo into enokwenzeka kwixesha elizayo.